Friday, December 14th, 2018 - 00:55:40
Wax walbe oo laga bartay guushii Arsenal ay ka gaartay Sky Blues
0 Tuesday December 22, 2015 - 06:50:18
(Kubadbile) Kooxda kubadda cagta Arsenal oo ku sugan gegada Fly Emirates aya musbaar xanaf badan isaga reebtay kooxda kusoo xigta ee Manchester City markii ay garka u gelisay 2-1.
Daawo Goos - Gooska Arsneal iyo Man City
0 Tuesday December 22, 2015 - 01:31:48
Kooxda Arsenal ayaa 2-1 kaga adkaatay kooxda Manchester City oo ay kula cayaartay garoonka Emirates, waxayna guusha uga mahad celinaysaa Theo walcott iyo OLiver Giroud waxaana labada gool ku caawiyay Mezut Ozil.
Kooxda Arsenal oo wada cad marsiisay Man City
0 Tuesday December 22, 2015 - 01:05:45
(Kubadbile)- Kooxda Arsenal ayaa guul muhiim ah ka gaartay kooxda Manchester City kadib marki ku marti qaaday garoonka Emarates.
Goorma ayaa la cayarayaa Super Cup-ka Soomaaliya?
0 Visits: 798 | Tuesday December 22, 2015 - 00:04:35
(Kubadbile)- Kooxaha ciidamada qalabka sida Heegan iyo Horseed ayaa mar kale todobaad gudahis ku loolami doona koob kale oo muhiim ah.
Xaflada Cayaaraha HIRDA iyo Abaalmarinta sanadka oo lagu qabtay Holland (SAWIRRO)
0 Monday December 21, 2015 - 22:15:50
Xaflad si heer sare ah loo soo agaasimay isla markaana lagu furayay cayaaraha xagaaga HIRDA AFT 2015, ayaa lagu qabtay magaalada Amsterdam ee dalka Holland. Waxaana uu sanadkaan noqonaya kii 11-aad, isagoona aad ugu duwanaa sanadihii hore marka la fiirayo qaabka qaban qaabada iyo barnaamijyada lagu…
Goolal 4-ah oo qiimaha Bale ka dhigay £109m, yaa doonaya??
0 Monday December 21, 2015 - 20:11:58
Manchester United ayaa isu diyaarineysa in ay £109m kula wareegto 4-dhaliye Gareth Bale oo ka tegaya Real Madrid xagaaga dambe.
Jose Mourinho oo 5-sano u saxiixay Manchester United?
0 Monday December 21, 2015 - 20:04:06
Wararka laga helayo Spain ayaa sheegaya in Jose Mourinho uu heshiis Afka ah la gaaray Manchester United.
Messi, Pogba iyo xiddigaha uu Guardiola keeni doono Man City
0 Monday December 21, 2015 - 15:09:13
Manchester City ayaa billaabeysa raadinta dad badan oo xiddigo ah, marka uu shaqadeeda la wareego Pep Guardiola oo imaan doona Etihad Stadium xagaaga dambe.
Ozil oo ku kalsoon in ay ka badin karaan Manchester City
0 Monday December 21, 2015 - 14:26:52
(Kubadbile) Wiilka qadka dhexe uga dheela kooxda kubadda cagta Arsenal Mesut Ozil ayaa aaminsan in caawa ay kooxdiisu Gunners edbin doonto dhigooda Manchester City oo caawa ay balansan yihiin.
Sepp Blatter Iyo Michel Platini Oo Min Sideed Sanadood La Ganaaxay
0 Monday December 21, 2015 - 13:37:30
Madaxweynaha Fifa Sepp Blatter iyo dhigiisa Uefa Michel Platini ayaa labaduba ciyaaraha laga ganaaxay muddo sideed sano ah dhammaan howlaha ay ka hayeen K/Cagta waxaana ganaaxan soo saaray gudiga anshaxa.
Gabdhaha Wadajir oo ku guulaystay tartanka kubada Koleyga degmooyinka 2015
0 Visits: 927 | Monday December 21, 2015 - 12:55:02
(Kubadbile)- Cayaartan oo ahayd fiinalka tartanka ee dhanka gabdhaha waxaa usoo daawasho tegay masuuliyiin ka socotay gobolka Banaadir, Guddiga Olombikada, Madaxda Xiriirada , gudoomiyayasha degmooyinka iyo taageerayaasha labada degmo oo garoonka soo buux dhaafshay.
Falanqeynta kulanka Arsenal vs. Manchester City, dhaawac, ganaax iyo Warar kale
0 Monday December 21, 2015 - 11:47:22
Kulan xiiso badan oo ka tirsan 10-ka loogu jecelyahay Premier League ayaa maanta waxaa wada qaadan doona, Arsenal iyo Manchester City, kulankaas wuxuu ka dhici doonaa Emirates.
Ogow wax walbe oo laga bartay guushii layaabka laheyd ee Real Madrid gaartay
0 Monday December 21, 2015 - 11:25:14
(Kubadbile) Kooxda kubadda cagta Real Madrid ayaa xalay guul cajiib ah oo 10-2 ka gaartay kooxda Rayo Vallecano oo sagaal cayaartoy uun ku dheelaysay hayeeshee mar cayaarta ku hogaamineysay 2-1.
Silva oo ku faraxsan la shaqeynta macallin Pallegrini
0 Monday December 21, 2015 - 11:10:26
(Kubadbile) Wiilka qadka dhexe uga dheela kooxda kubadda cagta Manchester City iyo qaranka Spain David Silva ayaa ku qanacsan ka hoos shaqeynta macallinka SKy Blues Manuel Oallgerini.
Arsenal iyo Manchester United oo ku loolami doona xiddig ka tirsan Leicester City oo aan aheyn Vardy
0 Monday December 21, 2015 - 10:54:49
(Kubadbile) Kooxaha kubadda cagta Arsenal iyo Manchester United ayaa lagu soo waramayaa inay ku dagaalami doonaan saxiixa wiilka garabka uga dheela Leicester City Riyad Mahrez marka la gaaro bisha Janaury oo suuqa kala iibsigu furmi doono.
Xiddig horay uga tirsanaa Man City iyo Brazil oo Xabsiga la dhigay, waa kuma, sababta? "Sawirro"
0 Monday December 21, 2015 - 10:00:17
Xiddiggii hore ee dalka Brazil iyo kooxda Man City ayey xabsiga dhigeen booliska Margao Police Station kulan ka tirsanaa Indian Super League oo eedeyn lagu helay.
Louis van Gaal 'Laba kulan Shaqo badbaadsi'
0 Monday December 21, 2015 - 09:36:41
Manchester United maareeyaheeda Louis van Gaal ayaa heysta 2 kulan si uu shaqadiisa u badbaadsado, sida warar sheegayaan.
Andy Murray oo loo magacaabay Shaqsiga Sanadka ee Sport-ga, abaal marinta BBC
0 Monday December 21, 2015 - 09:28:39
Andy Murray ayaa ku guuleystay Abaal marinta BBC ee Sports Personality of the Year award Sanadka 2015.
Atletico Madrid oo la garaacay hogaankana uga hari karta Barcelona
0 Monday December 21, 2015 - 01:19:15
(Kubadbile) Kooxda kubadda cagta Atletico Madrid ayaa guuldarro qaraar kala kulantay kooxda Malaga oo ay isaga horyimideen horyaalka La Liga.
« Prev1 ... 602603604605606607608 ... 732Next »